နေ့စွဲ : 2021-02-25
အမည် : Editor Yeni & Seni
လတ်တလော ကျော်ြကားသောအရာများ : 43
RESTUP Lavender Sap Patch
15,600ks-> 12900ks (1set = 5pcs)
ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေမှာ ဒုတိယအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ သင့်ရဲ့ခြေထောက်နှင့် ခြေဖဝါးကို relax လုပ်ပေးဖို့ အချိန်ရောက်ပါပြီ !!
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေကို ဖြေလျှော့ပေးပြီး သွေးလည်ပတ်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်ဖို့အတွက် သဘာဝကရတဲ့ ingredient တွေနဲ့ထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ "ခြေဖဝါးကပ်ခွါ" လေးကိုသုံးရင်း တနေကုန်လန်းဆန်းတဲ့ ခံစားချက်လေးနဲ့ smooth ဖြစ်နေမယ့် ခြေဖဝါးလေးရရှိအောင် လုပ်ကြည့်ကြမယ်နော်~
ခြေထောက်ဆိုတာ ကိုယ့် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာရှိသမျှ အင်္ဂါတွေနဲ့ ဆက်နွယ်နေတာကြောင့် အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင် တခြားအဆိပ်အတောက်နဲ့အညစ်အကြေးတွေ အများဆုံးကပ်တွယ်နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်လို့ သေချာဂရုစိုက်ဖို့တော့ လိုလိမ့်မယ်နော်
အိပ်ယာမဝင်ခင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီ ခြေဖဝါးကပ်ခွါလေးကို ၄နာရီ ဒါမှဟုတ် ၆နာရီလောက် ကပ်ပေးထားမယ်ဆိုရင် ခြေဖဝါးမှာရှိတဲ့ ချွေးနဲ့ တခြားအညစ်အကြေး အဆိပ်အတောက်တွေကို ဒီကပ်ခွါလေးက စုပ်ယူပေးနိုင်တာကြောင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေကိုလည်း လျော့ကျစေမယ့်အပြင် သွေးလည်ပတ်မှုကိုလည်း ပိုပြီးကောင်းမွန်လာစေမှာပါရှင့်~
စိတ်ကိုလန်းဆန်းစေမယ့် လာဗန်ဒါရနံ့လေးကလည်း ရနံ့ကုထုံးတစ်မျိုးလိုပဲ ခံစားရဦးမှာပါ
ဒီလိုအဆိပ်အတောက် အညစ်အကြေးတွေများလာရင် ရောဂါဖြစ်တာလည်း ပိုလွယ်တယ်လို့သိရပါတယ်
အထူးသဖြင့် အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့သူတွေ သုံးသင့်ပါတယ်နော်
#အချိန်အကြာကြီး ထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်ရသောသူများ
#အပြင်ထွက်ပြီး အလုပ်လုပ်ရခြင်းများ များပြီး relax လုပ်ဖို့ လိုအပ်နေသောသူများ
သင်ဟာ ဒီလိုလူတွေထဲကတစ်ယောက်ဆို လုံးဝ relax လုပ်ဖို့ လိုအပ်နေပြီနော်~!!
출처 : https://sskbeauty.com/Product/Detail/view/pid/314/cid/287